Iimpawu ezibalaseleyo zeDublin kunye nezoTyelelo kuwe
Yurophu Ayalend Dublin
Iimpawu ezibalaseleyo zeDublin
by UBernd Biege
Iimpawu ezibalaseleyo zeDublin ngabatyeleli
Tristan Reville / Flickr / CC BY-ND 2.0
Iintlobo ezilungileyo zeDublin - zithini? Umbuzo okhohlakeleyo, njengoko phantse njalo oku kuthanda kunye nomdla ngamnye, uhlahlo lwabiwo-mali, ixesha kunye nokuhamba. Kodwa makhe sizame ukucacisa ngokuqhelekileyo "kufuneka ibone" inkulu-ntanethi yase-Ireland, ekufuneka ibe kuyo nayiphi na uluhlu. Ngoko ke, nokuba unomnye nje usuku eDublin , bhetele uqinisekise ukuba ungaphuthelwa naliphi na le mibono ephezulu! Uninzi lufikelela kufumaneka lula kwiziko leedolophu-okanye liya kuba yinxalenye yebhasi yebhasi. Naluphi na indlela yokuthutha oya kuthatha isigqibo - unokuqiniseka ukuba ufuna ukukhangela ezinye iindlela!
Ngoko, ngaphandle kwe-ado, makhe sijonge kwiindawo ezikhangayo kakhulu zaseDublin ... ngokuchanekileyo kwe-alfabhethi!
Akunakuyinqaba inqaba kuyo yonke indawo, kwaye ngokuqinisekileyo ayikho umfanekiso wefestile, i-potch-potch yezitayela, ininzi yazo ayiyiyo ephakathi - iDublin Castle "i-Irish Stew" yeenqaba, yonke into ephonswe kuyo, unike umgca wombala ngoku kwaye. Inqobo (kwaye mhlawumbi yayinokuqala) Iinqaba zeViking zandisiwe, zilungiswe, zachithwa zaza zakhiwa emva kweenkulungwane. Namhlanje inqaba enkulu kunye neRoyal Chapel zibukeka zidlulileyo ngelixa zonke izakhiwo zolawulo zikwindlela ekhoyo yangoku. Umntu okhuselayo uphelile ngokupheleleyo (nangona ukubonakaliswa okubonakalayo kunokwazi ukuqonda apha nakwekho), kodwa igadi ezihle kunye namagumbi omgangatho omangalisayo enza okungaphezulu kweyona.
I-Dublin ngaphandle kweGuinness injengeMilwaukee ngaphandle ... ufumana iphuzu (okanye i-pint)! Akukho ndawo i-Guinness ngaphezulu kwinqanaba lokuqwalasela njengaseGuinness Storehouse. Ngokusekelwe kwimbali yaseSt James Gate (iDublin 8) le nxalenye ye-brewery yasekuqaleni. Ukugqaliswa kwetyeli yintonga "yamahhala" kwiBravity Bar ephezulu, ephakamileyo ngaphezu kweenqanawa zaseDublin. Kodwa khumbula ukuba i-Guinness ayiyena kuphela isiselo - ngaphaya kwe-Liffey uya kufumana i-Old Jameson Distillery, enye indawo eqhutywe ngotywala yokuhamba ngeehotele. Ngepesenti ephezulu. Apha u no kudla isidlo kwiMthendeleko ye-Barrelman, ngokuhlwa kokutya, isiselo, ingoma, nomdaniso ...
I-National Museum yase-Ireland eKitrare Street
Ngokunyanisekileyo kwiNational Museum yase-Ireland
Le yimyuziyamu enye ekufuneka iphakanyiswe ngokukhawuleza kuludwe lwezinto eziphambili kuzo zonke iindwendwe. I- National Museum of Archeology kunye neMbali e-Kildare Street (iDublin 2) ixhomekeke phambili kwi-Ireland yasekuqaleni (kunye nezinto ezithile zaseYiputa eziphonswe ngokufanelekileyo). Ungaphuthelwa umboniso obalaseleyo "Ubukumkani & Isibingelelo", oku kuza kukusondeza kakhulu kumzimba. Eyona nto inomdla kukuba iphiko elizinikele kwiViking Age eDublin, apho uza kubona ubomi bemihla ngemihla kule ndawo ebalulekileyo yaseNorse iya kuphinda iphinde ibe yimizekelo. Ukuba unamaxesha amaninzi, ungathatha kwiMyuziyam kaZwelonke e-Collins Barracks, ezazinikezela ubugcisa bokuhlobisa kunye nembali yakutshanje.
I-O'Connell Street kunye ne-General Post Office
I-O'Connell Street i-Arlin neyona ndlela ehamba phambili kuyo yonke indawo yaseYurophu. Ummandla wezithuthi ezihamba phambili (apho i-traam tram iqhutywe khona), ilawulwa yizithombe kunye nezikhumbuzo, izindlu ngakwesobunxele nangakwesokudla zikhulu kakhulu kwaye ziyamangalisa (kwaye zisetyenziselwa ukuthengisa). Ukuziphakamisa kweendawo phakathi kwezi ziya kwi- General Post Office (GPO) , indawo yomvukelo we-1916 kwaye yakhiwa ngokuthembeka emva kokukhuselwa ngamatye kunye nemfazwe yemfazwe. Umfanekiso obhedu weChakhullain ukhumbula amaqhawe awile. Umtsalane omtsha "Imbali Yengqina ye-GPO" kwindawo esezantsi-ukuvakaliswa kwezinto ezibangel Iindwendwe zase-US zinokuziva zichanekile ekhaya, nazo ... ezininzi iinkokhelo zokutya ngokukhawuleza zaseNyakatho Melika ziye zafaka ibango labo ku-O'Connell Street ...
Ipaki kamasipala ephakamileyo kakhulu emhlabeni, iPhoenix Park (kuxhomekeke kubani oyicelayo, eli bango linokuphikiswa) lingakugcina uxakeke iintsuku - ukusuka kwiindawo ezintle zokuhlala zikaMongameli wase-Ireland kunye ne-ambassador yase-United States kwi-kricket kunye ne-polo amasimu, ukusuka eAshtown Castle ukuya kwiCommari yeGarda, nakwiinkomo zezinkumbi zihamba zikhululekileyo kwizilwanyana ezingenakudliwa kwiDublin Zoo. Ungaphuthelwa kwiSitembu sePhoenix kunye nePapal Cross kufuphi. Imbali yokulwa nayo igxininiswa yiSikhumbuzo esikhulu saseWellington kunye ne-Fort Fort-Forted kwi-Thomas Hill.
Cathedral yasePatrick Patrick
UWalter Bibikow / i-Getty Images
Icawa enkulu eIreland kunye neNational Cathedral - le meko ekhethekileyo yanikezelwa kwicawa kwakungekho nongobhishophu enesihlalo sakhe sobukhosi! Eyasungulwa ngo-1191 ngu-Archbishop Comyn, i- Saint Patrick Cathedral yayisungulwa ngokubanzi phakathi kuka-1844 no-1869 kunye nemali eyanikezwa yanyuswa nguSir Benjamin Lee Guinness. Ngoko abatyeleli baya kufumana i-cathedral ye-neo-Gothic kunye namacandelo amdala. Apha nawe uya kubona amangcwaba kaDean Swift (wegama "iGulliver") kunye noStella wakhe othandekayo.
Bar Bar Temple
Ekuqaleni kwafakwa uphawu lwebhola le-wrecker kunye nokuhlaziywa njengendawo yokugcina ibhasi kunye nomzila wesitimela, indawo engasemzantsi ye-Liffey ebizwa ngokuba yi- Bar Bar Temple yagcinwa yaphinde yavuselelwa njenge "bohemian quarter". Ngeentsuku ezilungileyo uya kudibana nabaculi bezitalato kwaye ujonge i-cuisine yelizwe jikelele kunye neendawo zokupapasha. Kwiintsuku ezimbi indawo iya kugqitywa ngamaqela kwi "stag" okanye "ebusuku ebusuku". IBhayilethe yeTempile inokuba yinto enkulu kakhulu ebhankeni exutywe kwaye iqhutywe ngokurhweba ukuya kwindawo ephezulu - into yokuba "i-bohemian" ifumaneka kwizinga eliphezulu.
College College kunye neThala leencwadi
Eyasungulwa ngo-1592 nguEstre Elizabeth Elizabeth (ngenxa yezizathu zengxowankulu ye-Augustinian eyayiyintlungu yokuqedwa), iKholeji yaseTrinity nanamhlanje ilawula indawo yelizwe. Kodwa izakhiwo ezindala kakhulu (ezakhiwe ngezitena "iiRubrics" kuphela ukusuka ku-1700. Ezininzi izakhiwo ezakhayo zakhiwe ngexesha lokulungiswa kwe-1759. ILekrari yeKholeji yeZiqu zintathu likhaya kwiincwadi ezingaphezu kwesigidi kunye neminye imibhalo engabalulekanga. Eyona edume kakhulu yile "yiNcwadi yeeKells" - imigca emide ingafaka ehlobo, kwaye awusoze wakwazi ukubona yonke incwadi ngexesha lokuzonwabisa.
Uthutho loluntu eDublin
I-Souvenirs i-Best Souvenirs - Isikhokelo sokuThengwa
I-Royal Canal Way eDublin
Isihlwele (ded ded) Iintandokazi zaseDublin eziPhezulu eziPhambili
Ubulili kunye neProstitution eNew Zealand
Izidingo zeVisa eThailand
I-Tornado Sirens kwiNgingqi yeMetro City City
Thatha Uhambo lwe-Stuffington Bear Factory
Eyona ndlela ihamba phambili kwiiNdawo eziPhezulu zoLwandle kwi-East Coast
Isikhokelo sohambo kwiSiqithi saseGöland
Ngaba Kusemthethweni Ukuba Uphakame kwiiCaribbean?
IAlexandria VA Izenzo 2016
I-Pizza Enhle kwi-Little Rock
Ihotele ye-Mahabalipuram Ibalulekile yokuHlola
Iimpumelelo ze-Award ze-Academy ze-Award ezihlaziyiweyo eWashington, DC
Fontainhas: Isikhokelo esibalulekileyo sokujongana nekota ye-Goa yeLatin
Izinto eziphezulu ukuzenza kwaye ubone kwi-Ushuaia eMzantsi Melika